Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu weeraray deegaanno katirsan Gedo iyo Bakool.
Faahfaahino laga helayo Weeraro kala duwan oo ka Dhacay Magaalada Muqdisho Dowladda Hindiya oo joojisay Qamadigii ay dibadda udhoofin jirtay [Warbixin].. Xukuumadda Rooble oo lacag malaayiin dollar ah ku wareejisay Imaaraatka Carabta. G.W. Bush oo markii ugu horraysay siyaab leh usheegay in duullaankii Ciraaq uu ahaa mid gardarra ah. Qaraxyo iyo dilal ka dhacay degmooyin katirsan magaalada Muqdisho. 31 sano oo go'intaan ah kadib maamulka 'Somaliland' oo aan wali helin wax aqoonsi ah [Warbixin]. Shan (5) Askari oo Itoobiyaan ah oo Lagu Dilay Qarax ka Dhacay Bakool Dowladda Eritrea oo Sheegtay in TPLF Abaabuleyso Duullaan Cusub Ciidamada maamulka 'Somaliland' oo la wareegay degmo 70Km ujirta magaalada Garowe. Xasan Sheekh oo sheegay in uu xoojin doono xiriirka kala dhaxeeya Itoobiya. Askar katirsan ciidamada dowladda oo siyaabo kala duwan Muqdisho loogu dilay. Turkiga oo gaashaanka u daruuray dalabkii Finland iyo Sweden ee ku biiridda NATO.
Saturday May 14, 2022 - 15:27:48
Wararka ka imaanaya Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in markale weeraro dhabbagal ah iyo qaraxyo lagu beegsaday ciidamo Xabashi Itoobiyaan ah xilli ay dhaq dhaqaaqyo melleteri wadeen.
Xoogag jihaadi ah ayaa weeraro ku beegsaday ciidamada Xabashida iyo maleeshiyaadka dowladda xilli ay ku socdaalayeen wadada xiriirisa degmooyinka Dooloow iyo Luuq ee goblka Gedo.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalka ugu culus uu ka dhacay halka loo yaqaan Dalcadda Kibiro, dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiic iyo rasaas culus oo ay labada dhinac isdhaafsanayeen.
Dhinaca kale wararka laga helayo gobolka Bakool ayaa sheegaya in weeraro culus lagu qaaday ciidamo Itoobiyaan ah lagu weeraray deegaanka Washaakhada ee dhaca duleedka degmada Waajid, waa isbuucii labaad xiriir ah oo ay ciidamada Itoobiya weeraro culus kula kulmayaan gobollada Baay,Bakool iyo Gedo.
Shan (5) Askari oo Itoobiyaan ah oo Lagu Dilay Qarax ka Dhacay Bakool
Askar katirsan ciidamada dowladda oo siyaabo kala duwan Muqdisho loogu dilay.
20 madfac oo lagu weeraray saldhigga ciidanka 'Puntland' ee deegaanka Galgala.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo qaraxyo lagula beegsaday duleedka Ceelbarde.
Copyright © 2021 - 2022 SOMALIMEMO All Rights Reserved.